Dagaal Xalay Ka Dhacay Hiliwaa Iyo Dowladda Oo Sheegtay Iney Dishay Labo Alshabaab Ah * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dagaal Xalay Ka Dhacay Hiliwaa Iyo Dowladda Oo Sheegtay Iney Dishay Labo Alshabaab Ah
Muqdisho, Mareeg.com: Iska-hor-imaad kooban ayaa xalay ka dhacay degmada Hiliwaa ee magaalada Muqdisho, iyadoo meelo ka mid ah magaalada lagta maqlay rasaas xoog leh iyo qarax weyn.
Iska-hor-imaadka ayaa yimid kadib markii rag la sheegay iney ka tirsan yihiin Alshabaab ay abaare 10:00 fiidnimo weerar ku qaadeen saldhig ciidamada nabad sugiddu ku leeyihiin dhismaha Shaneemo Cabdi Waayeel oo ku taalla inta u dhaxeysa Isbitaalka SOS iyo Waxaracadde.
Gudoomiyaha degmada Hiliwaa Cumar Jacfaan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ilaa 10 ka mid ah Alshabaab xalay weerar ku qaadeen dhismaha Shaneemo Cabdi Waayeel oo ay degan yihiin ciidamada Nabad Sugidda.
Cumar Jacfaan ayaa sheegay in markii weerarkaasi dhacay ciidamo kala duwan u gurmadeen sladhigaas, islamarkaana la dabagalay kooxdii weerarka soo qaaday,l wuxuuna xusay in la helay gurigii ay galeen.
Wuxuu sheegay Cumar Jacfaan iney halkaas ku dileen ciidamadu ilaa 2 ka mid ah ragii saldhiga weeraray, islamarkaana ay gacanta ku hayaan 2 kale sida uu yiri.
Xalay ayaa rasaas waqti kooban socotay laga maqlay degmada Hiliwaa, iyadoo degmadaasi ka mid tahay meelaha ugu khatarta badan Muqdisho.
Maalmo ka hor waxaa Suuqa Xoolaha oo ka tirsan degmada Hiliwaa lagu dilay turjumaan la shaqeynayey AMISOM, waxaana maamulka degmadu sheegay iney toogteen labadii nin ee dilay.
Midowga Yurub Oo Ku Amaanay Baarlamanka Soomaaliya Qaabeynta U Codeyntii Xukuumada